သငျသညျ FS9 လေယာဉ်ပေါ်တွင်သုံးနိုငျ FSX?
မေးခွန်း သငျသညျ FS9 လေယာဉ်ပေါ်တွင်သုံးနိုငျ FSX?
3 နှစ်ပေါင်း5days ago #248 by JanneAir15
ဟယ်လို! ငါသည်သင်တို့ကိုအပေါ် FS9 လေယာဉ်သုံးနိုငျကွောငျးကိုကွား FSX။ ငါသည်သင်တို့အဘို့ကိုမတှေ့နိုငျသောတိကျသောလေယာဉ်များ FSX ဒါကြောင့်ငါကအပေါ်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်သိလိုပါတယ် FSX။ အဆိုပါလေယာဉ်စီမံကိန်းအဲယားဘတ်စ် A321 Sharklet ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါပြီးသားကြောင့်တပ်ဆင်ရန်အချို့သောနည်းလမ်းများကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြဘူး။ ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကဤအတူငါ့ကိုကူညီကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်မည်နည်း
3 နှစ်ပေါင်း5days ago #252 by Gh0stRider203
ဟုတ်ကဲ့, သင်လုပ်နိုင်သည်။ ဖိုင်တွဲအချို့အပေါ်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည် FSX FS9 ထက်။ အပေါ် FSXလူအပေါင်းတို့သည်ငါ့လေယာဉ်ပျံကဒီမှာသွားပါ:
B က: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft ကဂိမ်းများ \_ Microsoft ကလေယာဉ် Simulator X ကို \_ SimObjects \_ လေယာဉ်
ငါရှိရာသူတို့ FS9 အပေါ် install လုပ်မအောက်မေ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ကိုယ့်မျှတသောသတိပေး။ FS9 များအတွက်မဟုတ်ပါအားလုံး gauge နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် FSX.
0.306 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်